Yakyak, yemahara imwe nzira kuGoogle Hangouts | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe zvisingawanzo fanika Google app, Google Hangouts ichiri kushandiswa zvakanyanya. Chishandiso chekutaurirana icho vashandisi vazhinji vanoshandisa kwete chete kuti vataure asi kugadzira mavhidhiyo nemisangano yemavhidhiyo. Ichi chishandiso, sevamwe vazhinji ve Google, haina chimbo chekushandisa cheGnu / LinuxNaizvozvo, kuti tishandise, tinogona kushandisa webhu kunyorera kana isu tinoshandisa dzimwe nzira dzine dzakasiyana nharembozha masevhisi.
Imwe nzira inonakidza yaonekwa munguva pfupi yapfuura iyo inotipa kugona kumhanyisa Google Hangouts pasina kukosha kweGoogle Chrome kana mamwe masevhisi anobatsira, ingori Google Hangouts. Ichi chishandiso chinonzi YakYak.
Yakyak ndeyekuzvarwa kunyorera Gnu / Linux iyo inoshandisa matekinoroji ewebhu pakushanda kwayo, asi isu tinofanirwa kutaura kuti haisi yepamutemo Google application. Iva interface yakapusa yekubata iyo Hangout uye tinogona kutamba nemavara kuti tione mafoni nevashandisi. Nekudaro, isu tinokwanisa kutumira uye kugamuchira mameseji, kutanga mavhidhiyo musangano, kugovera mafaira, maneja hurukuro, ona chiratidzo chekunyora, nezvimwe
Panguva ino, Yakyak haiwanikwe mune chero yepamutemo repamhepo chero kupi kugoverwa, asi isu tinogona kuiisa nemaoko nekutenda kune yeGithub repository iyo iriko. Imwe sarudzo, kana isu tikashandisa snap mapakeji, ndeyekunyora mune iyo terminal:
Iyo nzira yemanyorero yakareba asi haina kuoma. Kutanga tinofanira kuenda kunzvimbo yeGithub uye kurodha pasi pasuru inodiwa. Kana tangotora pasuru yacho, tinofanirwa kuvhura iyo faira. Tichaona akateedzana emafaira uye mafaera anoumba chirongwa cheYakyak. Mushure meizvi, isu tinofanirwa kuitisa iyo faira «yakyak»Kuti isu tinogona kana kuzviita nekudzvanya kaviri kana nekuvhura chinongedzo mufaira nekunyora« yakyak ».
Parizvino ndiyo chete nzira dzekuisa chirongwa ichi, asi ichave iri nyaya yenguva pasati pave nechengetedzo yekumisikidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Yakyak, yemahara imwe nzira kuGoogle Hangouts
Ini ndanga ndisingazvizive, zvinosuwisa iwe unenge nguva dzose unofanirwa kudhonza asiri emuno mafomu, asi chii chaungaite? Kwaziso.
Ini handisi kuona zvine musoro pakushandisa yemahara interface kune yakavharwa software.
Noot onmly ndeyeshangu dzechando dzakagadzirwa kubva kune hese zvishandiso zvemafashoni, thjey
inogona kubatsira zvakanyanya munguva yechando zvakare sezvo iwo achidziya uye akasimba.
Mune shangu dzeghgh chitsitsinho, zvinonetsa kuenzanisa kurema kwedu kwese pamusoro pemabhora etsoka dzako pamwe nemupendero weshangu.
Mazuva ano, zvinogona kuve zvakaoma kunongedza mumigwagwa yakazara vanhu.
Pindura ku https://twitter.com/daster_bandung